စစ်တပ်က ရှမ်းရွာသားများပိုင် ပစ္စည်းကို သိမ်းသလားလူအိုတွေ နိုင်ငံရေး မလုပ်သင့်ကြောင်း ပြောတဲ့ ဦးခင်ညွန့်နဲ့ …တရုတ်နယ်စပ် လွန်ဆွဲမှုများကြား ဝ ပါဝင်လာခြင်းစစ်သုံး ရဟတ်ယာဉ်များ တရုတ်ထံမှ မရဟု “ဝ” ငြင်းဆိုတရုတ်ထံမှ စစ်သုံး ရဟတ်ယာဉ်များ “ဝ” ရရှိ နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
31 Responses	LeaveaReply Cancel reply
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Min Htet November 26, 2012 - 6:57 pm	မသေခင်လေး(အချိန်အခါသင့်တဲ့)ဒီအချိန်လေးမှာ၊မိမိတို့ တချိန်ကမိုက်မဲ၊ထင်ရာစိုင်းခဲ့တာလေးတွေကိုမြန်မာပြည်သူတွေကိုတရားဝင်ဝန်ချတောင်းပန်သင့်နေပါပြီ။
Reply	swe htwe November 27, 2012 - 12:42 am	That’s right.
Reply	Win November 27, 2012 - 12:56 pm	we like this comment
Reply	december21 November 27, 2012 - 1:37 pm	၀န်ချတောင်းပန်ရုံနဲ့ ဘာလို့ခွင့်လွှတ်ရမှာလဲ
Reply	koko November 26, 2012 - 7:40 pm	ဟေ.လူ မယုံဘူး ညာမနေနဲ့ ။စစ်တပ်ကလူတွေ ကလည်း တယောက်ကနေတယောက် လက်ညှိုး ထိုးနေတာဘဲ။ ဒါနဲ့များ စစ်
Reply	YMP November 26, 2012 - 9:21 pm	ကံကံ၏အကျိုးရဲ အနက် ကိုသာ သူတို့တကယ်နားလည်မယ်ဆိုရင် ပြည်သူတွေရဲဘဝ သူတို့ကြောင့်အခုလောက်ထိ ဆိုးသွားစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူး
Reply	မင်းခေါင် November 27, 2012 - 2:18 am	ရာဇ၀င်ရဲ့ မြောင်း(ရေဆိုး)ထဲမှာ သူ့ ကိုထားရစ်ခဲ့ပေတော့၊၊
Reply	ဖိုးသိ November 27, 2012 - 3:23 am	သူ့တပည့်တွေက (ထောက်လှမ်းရေး + ငြိမ်းချမ်းရေးယူထားတဲ့အဖွဲ့တွေ)က သူ့အရှိန်နဲ့ ဆိုးနေတာကို သူသိပါတယ်။ ဝေစုရနေပါတယ်။ သူတိုထေ့ာင်ကျတာ သူတို့ဆိုးလို့ပါ။ သူ အိမ်အကျယ်ချုပ်ချတာက မျက်လှည့်ပြတာပါ။ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေကိုအပြတ်ဆော်ချင်လို့ ပါ။ ဒါကြောင့် power struggle ဟုတ်လို့ပြောတာပါ။ ဒါအမှန်ပါ။ ပုလင်းတူဗူးဆို့ဖြစ်နေလို့ပါ။ သူ့ကို ဆိုင်းငံ့ထောင်ဒဏ်ချတာကြည့်ပါ။ သူတို့အချင်းချင်းဝါးရိုက်ပြီးသားပါ။ အခုသွားလေရာ တပ်တွေက သူ့အတွက်ဘယ်လိုစီမံပေးတယ်ဆိုတာ မြင်စေချင်စမ်းပါဘိ။ သစ်ခွရောင်းစားရတဲ့သူက အကျယ်ချုပ်ကလွတ်လွတ်ချင်း သိန်း ရာချီလှူနေနိုင်တာ သူ့ဆရာကထောက်ပံ့တာပဲလား။ ချင့်ယုံကြစမ်းပါ။ ဗိုလ်ခင်ညွန့်ကြောင့် ပျက်စီးသွားတဲ့ ဘာသာရေး၊ ပညာရေး၊ လူငယ်ဘ၀တွေအတွက် သူ့ပြန်ခံရမှာပါ။ မဂ်တားဖိုလ်တားပါ။
Reply	Win November 27, 2012 - 12:58 pm	that’s true
Reply	မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ November 27, 2012 - 3:24 am	အပေါ်က ရေးထားတဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေ အကုန်မှန်ပါတယ်။
Reply	ဖိုးသိ November 27, 2012 - 3:25 am	အမှားပြင်ဆင်ချက်။။
Reply	true talker November 27, 2012 - 4:15 am	Believe it or Not. I think this isastory,told and create by him.Every body knows What he did,how many people are tortured,killed,and lost their precious life,because of him. He did more than the words “Duty.” Unbelievable liar. Just imagine the house he stays,and the cars ,he owned,can this money,are from selling orchid? Reply	AKN November 27, 2012 - 9:34 am	We have to accept that bygone is bygone. Mainly, we like to remind the present power holders not to repeat such mistakes. They should understand that there is no permanent power except THE PEOPLES POWER.
Reply	pn wara November 27, 2012 - 1:29 pm	ရာထူးက ပြုတ်သွားလို့အစွယ်ကျိုးသွားတာ- ရာထူးသာမပြုတ်လို့ ကတော့-ဘယ်လောက် မာရေ ကြောရေရှိပြီး ၀ံ့ဝါ ထောင်လွှားလိုက်မလဲ မသိဘူး။ နိုင်ငံရေးသမားတွေ အားလုံးထောင်ထဲရောက်လို့နေရာတောင် ဆန့် မယ်မထင်ဘူး။
Reply	ွှံ THEIN SWE November 27, 2012 - 3:36 pm	တို့ တိုင်းပြည် ဆင်းရဲသွားတာ ၊ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်ခဲ့ ကြရတာ၊ကျောင်းသားတွေသေခဲ့ ကြရတာ၊ပညာရေးတွေအောက်တန်းကြခဲ့ ကြရတာ ၊ တစ် တရားခံက ဦးနေ၀င်းဆိုရင် နှစ်တရားခံက ဦးခင်ညွန့်ပါ ။
Reply	ဆလိုင်း November 27, 2012 - 9:00 pm	သိန်းရာချီတန်တဲ့သစ်ခွပန်းက ဘာသစ်ခွပန်းလည်း
သနားစရာလုပ်မနေနဲ့ စစ်ခုံရုံးတင်ရမယ် Reply	burmathwe November 27, 2012 - 9:13 pm	ဦးခင်ညွန့် ဒီလိုဖြစ်သွားတာက..ဒေါ်ကြိုကြိုင် နဲ့ ဒေါ်ခင်ဝင်းရွှေ အားပြိုင်မှု့ ပါ။ဒေါ်ခင်ဝင်းရွှေကပညာတတ်တယ်။ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်က အင်္ဂလိပ်စာမတတ်တော့ …အမျိုးသမီးရေးရာပွဲတွေမှာ အရှက်ကွဲတယ်လေ…အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာလည်း မယ်တော်ကြီး ဆိုရင် ဦးသန်းရွှေတောင် မလွန်ဆန်ရဲပါဘူး၊မြန်မာပြည်အုပ်ချုပ်ရေးက ပညာမတတ် ဘဲ နောက်ဖေးပေါက်က ၀င်လာမယ့် လာဘ်ငွေ၊စည်းစိမ် ကိုမက်နေတဲ့ မိန်းမတွေ ၀င်စွပ်ဖက်နေသမျှ ဘယ်တော့ မှမကောင်းဘူး၊အခုလည်းဒီလမ်းစဉ်ဘဲ…
Reply	ကိုကို November 27, 2012 - 9:13 pm	အရှက်မရှိ့ဘူး
Reply	ပက်ထေ November 27, 2012 - 9:21 pm	လူတွေရဲ့အသိုင်းထဲးဝင်ချင်လို့လား
Reply	ဘဂျမ်း November 27, 2012 - 9:23 pm	ကိုညွန့် တို့လင်မယား ငခူပြုံးလေးပြုံးတတ်နေပြီဘဲ၊၊
Reply	အိမ်မက် November 27, 2012 - 9:23 pm	သနားစရာလေးမို့
Reply	လလု November 27, 2012 - 9:29 pm	ငါတော့အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်နေပြီးမထင်နဲ့
Reply	R Lu November 28, 2012 - 9:35 am	ကာလ၀ိဘတ် နောက်ပိုးတက်တာပါ…သူလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေက သူခံရတာထက်အများကြီးဆိုးပါတယ်….သူလုပ်တုန်းကလည်း တဆုံးတချက်ကိုလုပ်ခဲ့တာပါ..ခိုင်းလို့လုပ်ရတာကို စေတနာနဲ့ ပရောဂပါထည့်ပြီး ပိုပို သာသာလုပ်ခဲ့တာအားလုံးသိကြမှာပါ..
Reply	Myanmar Pyithar November 28, 2012 - 12:15 pm	Ko Phoe Thi,
Reply	burmathwe November 28, 2012 - 8:13 pm	မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးက သူဌေးတစ်ယောက်ပိုင်တဲ့ ဘောလုံးအသင်းလိုဘဲဗျ။..သူဌေးက..တယုတ်ကြီး..နည်းပြကဦးသန်းရွှ၊ေ၇ှတန်းတိုက်စစ်မှုးက..ဦးသိန်းစိန်၊စိုင်းမောက်ခမ်း၊ဦးညာဏ်ထွန်..ဦးတင်အောင်မြင့် ဦး ( ဒါဏ်ရာရလို့ ကစားသမားဘ၀မှ အပြီးတိုင်အနားယူသွားသူ )…ကွင်းလယ်က ဦးရွှေမန်း ဦးခင်အောင်မြင့် နှင့် သမတရုံးဝန်ကြီးများ…နောက်တန်း..ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ..ဂိုး..နွမ်းပါးတဲ့ ပြည်သူတွေကိုငွေညှစ်ပြီး မပေးနိုင်ရင် ဖမ်းမယ် တကကဲ နဲ့ ပြည်သူ ရဲပေါ့ ဗျာ။
Reply	Ngal Hriang November 29, 2012 - 7:07 am	What comes around goes around. Life has twist and turn. Khin Nyunt is gone for good and he will not return to power. He reaps today what he sowed yesterday. The bigger problem is he will reap more in Hell. He tortured many, he took many lives for which he will pay the price in Hell. He behaves today like an innocent man. No way. Than Shwe and Khin Nyunt are from the same family of Devil. I do not want them to be my neighbors in my life after death.
Reply	ohnmar November 29, 2012 - 11:20 am	ဦးခင်ညွန့်ရဲ့အမှားကတော့ဦးသန်းရွှေကိုလူလို့ထင်မိလိုက်တာပါဘဲ။ တစ်ကယ်တိုင်းပြည်
Reply	aung thit min November 29, 2012 - 1:56 pm	How we have to forget about military dictators especially like former spy chief Gen.Khin Nyunt. what he said is that his own word… where is the truth about Burma, the Burmese people, the generation and the genuine family shatter heart. I believed he isareal cunning power manipulator asatop of the top. If he wants to liveaordinary citizen of Burma, and like he said that he never killed anyone during his time in office he must showachallenge to Gen. Than Shwe and he’d prove to get ” the people power” back from the ……….
Reply	tihaa November 29, 2012 - 3:13 pm	အလိုတူ အလိုပါ လက်ပါးစေ
Reply	Maung Win November 29, 2012 - 11:08 pm	ပါပဲ ပြောပြော ဦးခင်ညွန့် ကိုတော့ သံတယ မကင်းဘူး
Reply	Tun Myint Khaing November 29, 2012 - 11:48 pm	Long life Irrawaddy.